ဥရောပအသင်းတွေ အားပြိုင်ကြမယ့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များ
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များ
9 Jul 2018 . 12:47 AM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ချန်ပီယံဆုကို ရရှိဖူးတဲ့ အသင်းက ၁၉၆၆ ချန်ပီယံ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ၁၉၉၈ ချန်ပီယံ ပြင်သစ်အသင်းတို့သာ ချန်ပီယံဟောင်းတွေအဖြစ် နောက်ဆုံး (၄)သင်းစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး (၄)သင်းစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ဆိုတာ ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို တစ်ကြိမ်မှ မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ။ ဆီမီးဖိုင်နယ်အတွဲအဖက်တွေအရ ပြင်သစ်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ အင်္ဂလန်တို့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ ဥရောပအသင်းတွေကြီး နောက်ဆုံး (၄)သင်းအဆင့်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ (၉)ကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး All-Europe Final အဖြစ် (၅)ကြိမ်မြောက် မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ခရိုအေးရှားတို့သာ ချန်ပီယံဟောင်း ပြိုင်ဘက်တွေကို ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင် ချန်ပီယံအသင်းသစ်ကို သေချာပေါက် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်းက ၁၉၉၈ ပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆု ရယူနိုင်ခဲ့တာက သူတို့ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သလို ၁၉၈၆ မှာ စတုတ္ထနေရာ ရရှိခဲ့တာက ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် အအောင်မြင်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအနေအထားမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ ဗိုလ်လုပွဲရောက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်တော့မယ်။
ချန်ပီယံဟောင်းတွေအဖြစ် နောက်ဆုံး (၄)သင်းစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလန်ဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ပြိုင်ပွဲနဲ့ ၁၉၆၆ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကလွဲလို့ ကျန်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ အသင်းတွေပါ။ အိမ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲကလွဲလို့ ကျန်ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံမဖြစ်ဖူးတဲ့ အသင်းတွေဖြစ်လို့ ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ‘လူမလေး၊ ခွေးမခန့်’ လိုဖြစ်နေလို့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အိမ်ကျယ်အသင်းတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အသင်းတွေပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဒီအနေအထားကို ခြေဖျက်ဖို့ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအနေအထားတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ထားကြပါပြီ။ ဆီမီးဖိုင်နယ်ဆိုတဲ့ အတားအဆီးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားကို ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ အိမ်ကျယ်အသင်းတွေ အဖြစ်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာမယ့်အသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံအသင်းသစ်အဖြစ် မှတ်တမ်းထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာမယ့် အသင်းတွေရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကြောင့် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေက စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပေးစွမ်းနေဦးမှာပါ။
ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် (၂)ပွဲကို အပိုင်း (၂)ပိုင်းခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်သစ်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့က အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းတွေနဲ့ ဒီအဆင့်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရိုအေးရှားနဲ့ အင်္ဂလန်တို့ကတော့ ခြေစွမ်းပိုင်းထက် ကံတရားကြောင့် ဒီအဆင့်အထိ ရောက်လာတဲ့ အသင်းတွေကို ယေဘုယျ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ပြင်သစ်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ဟာ အုပ်စုတွင်းမှာလည်း ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး အုပ်စု ပထမနေရာကို အသီးသီး ရရှိကာ နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာ အာဂျင်တီးနား၊ ဥရုဂွေးတို့လို ကမ္ဘာ့ဖလား မှတ်တမ်းကောင်းတွေရှိတဲ့ အသင်းတွေကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသလို ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာလည်း ဂျပန်၊ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဘရာဇီးလ်တို့ကို ခက်ခက်ခဲခဲကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ အတောင့်တင်းဆုံး လူစာရင်းကို နှစ်သင်းစလုံး ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ခြေစွမ်းပိုင်း အကောင်းဆုံးရောက်နေတဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် ဒီအဆင့်အထိ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ဆီမီးဖိုင်နယ် လမ်းကြောင်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းတို့ကတော့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမှုတွေနဲ့ ဒီအဆင့်ထိ ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ တွက်ဆလို့ရနေပါတယ်။ နာမည်ကြီးအသင်းတွေပါဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာလည်း ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခရိုအေးရှားအသင်းဟာ ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်နဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်တွေမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သလို၊ အင်္ဂလန်အသင်းကလည်း ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ကိုလံဘီယာအသင်းကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်၊ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဆွီဒင်အသင်းကို ဂိုးသမား ပစ်ဖို့ဒ်ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် လက်စွမ်းတွေကြောင့် ကျော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။ ပုံစံကောင်းပြနေတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းမှာ ဘယ်အသင်းက ဗိုလ်လုပွဲရောက်ပြီး၊ ကံတရားဖေးမမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းမှာ ဘယ်အသင်းက ဗိုလ်လုပွဲရောက်မလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းနေခဲ့ပါပြီ။ ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းမှာ ဘယ်အသင်းက သူတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းကို ဆက်ထိန်းသွားနိုင်မလဲ၊ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းတို့မှာကော ဘယ်အသင်းက ကံတရားဖေမမှုတွေကို ဆက်လက်ရရှိသွားမလဲဆိုတာ မကြာခင် အဖြေပေါ်သွားတော့မှာပါ . . .
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များ
ပြင်သစ် – ဘယ်လ်ဂျီယံ (ဗုဒ္ဓဟူးနံနက် ၀၀း၃၀ နာရီ)
ခရိုအေးရှား – အင်္ဂလန် (ကြာသပေးနံနက် ၀၀း၃၀ နာရီ)
Photo:STE India, AS, FIFA.com
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာ ခနျြပီယံဆုကို ရရှိဖူးတဲ့ အသငျးက ၁၉၆၆ ခနျြပီယံ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ ၁၉၉၈ ခနျြပီယံ ပွငျသဈအသငျးတို့သာ ခနျြပီယံဟောငျးတှအေဖွဈ နောကျဆုံး (၄)သငျးစာရငျးမှာ ပါဝငျလာခဲ့တယျ။ နောကျဆုံး (၄)သငျးစာရငျးမှာ ပါဝငျလာတဲ့ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘယျလျဂြီယံတို့ဆိုတာ ပွိုငျပှဲသမိုငျးမှာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို တဈကွိမျမှ မရောကျဖူးခဲ့တဲ့ အသငျးတှေ။ ဆီမီးဖိုငျနယျအတှဲအဖကျတှအေရ ပွငျသဈနဲ့ ဘယျလျဂြီယံ၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ အင်ျဂလနျတို့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရမယျ။ လကျရှိအနအေထားအရ ဥရောပအသငျးတှကွေီး နောကျဆုံး (၄)သငျးအဆငျ့မှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ (၉)ကွိမျမွောကျ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး All-Europe Final အဖွဈ (၅)ကွိမျမွောကျ မွငျတှရေ့တော့မယျ့ ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ ခရိုအေးရှားတို့သာ ခနျြပီယံဟောငျး ပွိုငျဘကျတှကေို ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ရငျ ခနျြပီယံအသငျးသဈကို သခြောပေါကျ မွငျတှရေ့မှာဖွဈတယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျးက ၁၉၉၈ ပွိုငျပှဲမှာ တတိယဆု ရယူနိုငျခဲ့တာက သူတို့ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံးဖွဈသလို ၁၉၈၆ မှာ စတုတ်ထနရော ရရှိခဲ့တာက ဘယျလျဂြီယံအတှကျ အအောငျမွငျဆုံး ပွိုငျပှဲတှဖွေဈခဲ့တယျ။ ဒီအနအေထားမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဘယျလျဂြီယံတို့ ဗိုလျလုပှဲရောကျတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးတငျနိုငျတော့မယျ။
ခနျြပီယံဟောငျးတှအေဖွဈ နောကျဆုံး (၄)သငျးစာရငျးမှာ ပါဝငျလာတဲ့ ပွငျသဈနဲ့ အင်ျဂလနျဆိုတာကလညျး ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ပွိုငျပှဲနဲ့ ၁၉၆၆ ပွိုငျပှဲတှမှော ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာကလှဲလို့ ကနျြပွိုငျပှဲတှမှော ခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိတဲ့ အသငျးတှပေါ။ အိမျရှငျဖွဈခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲကလှဲလို့ ကနျြပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံမဖွဈဖူးတဲ့ အသငျးတှဖွေဈလို့ ထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈပမေယျ့ ‘လူမလေး၊ ခှေးမခနျ့’ လိုဖွဈနလေို့ ပွိုငျဘကျတှရေဲ့ အိမျကယျြအသငျးတှအေဖွဈ သတျမှတျခံထားရတဲ့ အသငျးတှပေါ။ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ ဒီအနအေထားကို ခွဖေကျြဖို့ သူတို့အတှကျ အကောငျးဆုံးအနအေထားတဈရပျကို ကိုယျစီပိုငျဆိုငျထားကွပါပွီ။ ဆီမီးဖိုငျနယျဆိုတဲ့ အတားအဆီးကို ဖွတျကြျောနိုငျတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောဖို့ အနီးစပျဆုံးအနအေထားကို ရောကျရှိလာတော့မှာပါ။ အိမျကယျြအသငျးတှေ အဖွဈကနေ ရုနျးထှကျဖို့ကွိုးပမျးလာမယျ့အသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံအသငျးသဈအဖွဈ မှတျတမျးထိုးနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးလာမယျ့ အသငျးတှရေဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုတှကွေောငျ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျတှကေ စိတျလှုပျရှားမှုတှကေို ပေးစှမျးနဦေးမှာပါ။
ဆီမီးဖိုငျနယျ ပှဲစဉျ (၂)ပှဲကို အပိုငျး (၂)ပိုငျးခှဲကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ပွငျသဈနဲ့ ဘယျလျဂြီယံတို့က အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးတှနေဲ့ ဒီအဆငျ့ကို ရောကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပွီး ခရိုအေးရှားနဲ့ အင်ျဂလနျတို့ကတော့ ခွစှေမျးပိုငျးထကျ ကံတရားကွောငျ့ ဒီအဆငျ့အထိ ရောကျလာတဲ့ အသငျးတှကေို ယဘေုယြ သတျမှတျလို့ ရပါတယျ။ ပွငျသဈနဲ့ ဘယျလျဂြီယံတို့ဟာ အုပျစုတှငျးမှာလညျး ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျခဲ့ပွီး အုပျစု ပထမနရောကို အသီးသီး ရရှိကာ နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျခဲ့တဲ့ အသငျးတှဖွေဈပါတယျ။ ပွငျသဈအသငျးဟာ အာဂငျြတီးနား၊ ဥရုဂှေးတို့လို ကမ်ဘာ့ဖလား မှတျတမျးကောငျးတှရှေိတဲ့ အသငျးတှကေို အဆငျ့ဆငျ့ကြျောဖွတျခဲ့ရသလို ဘယျလျဂြီယံအသငျးဟာလညျး ဂပြနျ၊ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ ဘရာဇီးလျတို့ကို ခကျခကျခဲခဲကြျောဖွတျခဲ့ရတယျ။ အတောငျ့တငျးဆုံး လူစာရငျးကို နှဈသငျးစလုံး ပိုငျဆိုငျထားသလို ခွစှေမျးပိုငျး အကောငျးဆုံးရောကျနတေဲ့ အနအေထားတှကွေောငျ့ ဒီအဆငျ့အထိ တကျရောကျခဲ့ကွတာပါ။
ဆီမီးဖိုငျနယျ လမျးကွောငျးတဈဖကျမှာရှိနတေဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးနဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးတို့ကတော့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမှုတှနေဲ့ ဒီအဆငျ့ထိ ရောကျလာခဲ့တယျလို့ တှကျဆလို့ရနပေါတယျ။ နာမညျကွီးအသငျးတှပေါဝငျတဲ့ လမျးကွောငျးကို ရှောငျလှဲနိုငျခဲ့သလို ပွိုငျဘကျအသငျးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရာမှာလညျး ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုတှရှေိခဲ့တဲ့ အသငျးတှဖွေဈပါတယျ။ ခရိုအေးရှားအသငျးဟာ ရှုံးထှကျ (၁၆)သငျးအဆငျ့နဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့တှမှော ပွိုငျဘကျအသငျးတှကေို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့သလို၊ အင်ျဂလနျအသငျးကလညျး ရှုံးထှကျအဆငျ့မှာ ကိုလံဘီယာအသငျးကို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ၊ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ဆှီဒငျအသငျးကို ဂိုးသမား ပဈဖို့ဒျရဲ့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ လကျစှမျးတှကွေောငျ့ ကြျောဖွတျလာနိုငျခဲ့တာပါ။ ပုံစံကောငျးပွနတေဲ့ အသငျးနှဈသငျးမှာ ဘယျအသငျးက ဗိုလျလုပှဲရောကျပွီး၊ ကံတရားဖေးမမှုတှေ ရှိနတေဲ့ အသငျးနှဈသငျးမှာ ဘယျအသငျးက ဗိုလျလုပှဲရောကျမလဲဆိုတာ စိတျလှုပျရှားဖို့ ကောငျးနခေဲ့ပါပွီ။ ပွငျသဈအသငျးနဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျးမှာ ဘယျအသငျးက သူတို့ရဲ့ ခွစှေမျးကောငျးကို ဆကျထိနျးသှားနိုငျမလဲ၊ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးတို့မှာကော ဘယျအသငျးက ကံတရားဖမေမှုတှကေို ဆကျလကျရရှိသှားမလဲဆိုတာ မကွာခငျ အဖွပေျေါသှားတော့မှာပါ . . .
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျ ပှဲစဉျမြား
ပွငျသဈ – ဘယျလျဂြီယံ (ဗုဒ်ဓဟူးနံနကျ ၀၀း၃၀ နာရီ)
ခရိုအေးရှား – အင်ျဂလနျ (ကွာသပေးနံနကျ ၀၀း၃၀ နာရီ)